एमालेमा बादल समुह यता न उता अबको बाटो कता ? - Samriddha Online
एमालेमा बादल समुह यता न उता अबको बाटो कता ?
समृद्ध अनलाईन ६ मंसिर २०७८, सोमबार १६:५८ मा प्रकाशित ( २ हफ्ता अघि) १६५६५ पाठक संख्या
काठमाडौं, म‌सिर ६ गते । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उत्तराधिकारीको रूपमा लिइन्थ्यो रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई । प्रचण्डले नेकपा एमालेसँगष् गरेको पार्टी एकतापछि प्रचण्ड र बादलबीचको सम्बन्ध चिसियो ।
अन्ततः प्रचण्ड र बाद एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नै रहेन र दुई खेमामा विभाजित भएर बस्न बाध्य भए । साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केपी शर्मा ओली–प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबीचको आन्तरिक संघर्षका वेला प्रचण्डले बादलको साथ पाएनन्। माओवादीका तर्फबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि नेकपा विभाजनका क्रममा उनि एमालेमै रहे।
नेकपाको एकता भंग भएपछि पहिलोपटक एमालेको महाधिवेशन हुँदै छ। महाधिवेशनमा एमालेमै रहेको पूर्वमाओवादी नेताहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। अहिले पूर्वमाओवादी नेताहरू बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीसहित एमालेमा २३ केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्।
पूर्वमाओवादी समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, उपाध्यक्षमा टोपबहादुर रायमाझी, सचिवमा मणि थापा र लेखराज भट्ट र स्थायी समिति सदस्यमा प्रभु साहले दाबी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले त्यसबारेमा मुख खोलेका छैनन्। पूर्वमाओवादी समूहले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दुई सचिवसहित २५ केन्द्रीय सदस्य दाबी गरेको बादल निकट स्रोतले बतायो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने पहल भइरहेका वेला उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। १५ जनाको पदाधिकारीमा दोब्बर आकांक्षी भएकाले सर्वसम्मतको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ एमालेमा।
बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने सहमति गरेका ओलीलाई पछिल्लो समय पार्टीभित्रबाटै दबाव बढेको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षकै लाइनमा छन् । ओलीले आफ्नो विश्वासपात्र नै पार्टीको जिम्मेवार पदमा ल्याउन खोजिरहेकाले पोखरेल वा नेम्वाङको सम्भावना बलियो छ। आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेम्वाङको व्यवस्थापन ओलीलाई चुनौती त छँदै छ बादललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुने बताइए पनि कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नेतृत्वलाई चुनौती थपिएको छ । पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू भनेर आफूहरूले अर्को व्यवहार नगर्ने भनिए पनि तल्लो कमिटीका नेता तथा कार्याकर्ताले पूर्व माओवादी नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ ।